စိတ်ပျက်စရာ ကစားသမားများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုပျောက်ဆုံးခြင်း - United News Myanmar
ယူနိုက်တဒ်အတွက် ကပ်ဆိုးဆိုက်တဲ့နေ့လို့ ဆိုရမယ့် တနဂ်နွေနေ့ညအတွက် ဘယ်ကစားသမားကမှ ပြူံပျော်စေခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒိုင်ကစလို့ ဆိုးလ်ရှားနဲ့ အဒ်ဝုဒ်ဝဒ် အဆုံး ယူနိုက်တဒ် နဲ့ ပက်သက်သမျှဟာ အကျဉ်းတန်လွန်းတဲ့ တစပြင်လို စုတ်ပြတ်သတ်နေပါတယ်။ မြို့ပျက်ကြီးလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့်သာ နာကျင်မှု့တွေထွေးပိုက်ရင်း အတိတ်ကိုသာ မျှော်ငေးနေမှာတော့အသေချာ။စိတ်ပျက်စရာညနေခင်းတွေကို ဘယ်လိုဆေးကျောရမလည်း မသိချင်တော့အောင် စိတ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ယူနိူက်တဒ်အပေါ် အရာရာကို မေ့ဖျောက်ခွင့်ရခဲ့ရင်လည်းကောင်းပါတယ်။အတိတ်ကခမ်းနားခဲ့ခြင်းတွေဟာအခုချိန်မှာ အသုံးမဝင်ကြောင်း ဒီကစားသမားတွေရဲ့ရမှတ်ကပြောနေကြောင်းဆိုးလ်ရှားကိုသိစေပါရဲ့….
ပုံမှန်လက်စွမ်းမှာသာမရှိနေရင် အခုထက်ပိုပြီးဂိုးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းရင်ဆိုင်အတွေ့ ပုတ်ထုတ်ခဲ့ရတာကပဲ လေးကြိမ်ခန့်ရှိပြီး တစ်ခုတည်းသော ရောင်ခြည်မျှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူး။
သူက ဘာကြောင့် လက်ပတ်နဲ့ထိုက်တန်နေလည်းမစဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ။
ရှော – ၁
အတတ်နိုင်ဆုံးရုန်းကန်ပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ဗျူဟာအမှားကြောင့် လွတ်ကွက်များစွာကို တစ်ယောက်ထဲမတားဆီးနိုင်တာကြောင့် ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့သူပါပဲ။
ဟိုဆေးရဲ့အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သလို ရှုံးပွဲအတွက် ဘာစောဒကမှတက်လို့မရပါဘူး။
ပယ်နတီကနေ ဦးဆောင်ဂိုးယူပေးမယ့် အရာတိုင်းကဘရူနိုတစ်ယောက်ထဲ ထမ်းတင်လို့ မရနိုင်တာဆိုးလ်ရှားသိသင့်ပါပြီ။
မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် – ၃
အမှန်ဆိုသူ့အနေနဲ့ပွဲထဲကတောင်ထွက်သွားသင့်တာပါ။တစ်ယောက်ထဲရုန်းကန်နေရတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ရတာပိုပြီးပင်ပန်းလာပါတယ်။မန်ချက်စတာ သားတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးနဲ့ ယူနိုက်တဒ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်က ဒီနေ့ပွဲအတွက်တော့ပိုပြီးပင်ပန်းစေမှာအသေချာပါပဲ။
မမှားပေမယ့် ပိုပြီးပါးနပ်ခဲ့သင့်တယ်။တကယ်လို့သူသာမထွက်သေးရင် ပွဲအခြေအနေကတမျိုးတမည်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ယူနိုကျတဒျအတှကျ ကပျဆိုးဆိုကျတဲ့နလေို့ ဆိုရမယျ့ တနဂျနှနေညေ့အတှကျ ဘယျကစားသမားကမှ ပွူံပြျောစခေဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ဒိုငျကစလို့ ဆိုးလျရှားနဲ့ အဒျဝုဒျဝဒျ အဆုံး ယူနိုကျတဒျ နဲ့ ပကျသကျသမြှဟာ အကဉျြးတနျလှနျးတဲ့ တစပွငျလို စုတျပွတျသတျနပေါတယျ။ မွို့ပကျြကွီးလိုတိတျဆိတျနတေဲ့ အိုးထရဒျ့ဖိုဒျ့သာ နာကငျြမှု့တှထှေေးပိုကျရငျး အတိတျကိုသာ မြှျောငေးနမှောတော့အသခြော။စိတျပကျြစရာညနခေငျးတှကေို ဘယျလိုဆေးကြောရမလညျး မသိခငျြတော့အောငျ စိတျပကျြခဲ့ရတဲ့ ယူနိူကျတဒျအပျေါ အရာရာကို မဖြေ့ောကျခှငျ့ရခဲ့ရငျလညျးကောငျးပါတယျ။အတိတျကခမျးနားခဲ့ခွငျးတှဟောအခုခြိနျမှာ အသုံးမဝငျကွောငျး ဒီကစားသမားတှရေဲ့ရမှတျကပွောနကွေောငျးဆိုးလျရှားကိုသိစပေါရဲ့….
ပုံမှနျလကျစှမျးမှာသာမရှိနရေငျ အခုထကျပိုပွီးဂိုးပွတျသှားနိုငျပါတယျ။ တဈယောကျခငျြးရငျဆိုငျအတှေ့ ပုတျထုတျခဲ့ရတာကပဲ လေးကွိမျခနျ့ရှိပွီး တဈခုတညျးသော ရောငျခွညျမြှငျဖွဈခဲ့တယျဆိုရငျမမှားပါဘူး။
သူက ဘာကွောငျ့ လကျပတျနဲ့ထိုကျတနျနလေညျးမစဉျးစားတတျအောငျပါပဲ။
ရှော – ၁
အတတျနိုငျဆုံးရုနျးကနျပမေယျ့ ဆိုးလျရှားရဲ့ဗြူဟာအမှားကွောငျ့ လှတျကှကျမြားစှာကို တဈယောကျထဲမတားဆီးနိုငျတာကွောငျ့ ဘာမှမတတျနိုငျတဲ့သူပါပဲ။
ဟိုဆေးရဲ့အဓိကပဈမှတျဖွဈသလို ရှုံးပှဲအတှကျ ဘာစောဒကမှတကျလို့မရပါဘူး။
ပယျနတီကနေ ဦးဆောငျဂိုးယူပေးမယျ့ အရာတိုငျးကဘရူနိုတဈယောကျထဲ ထမျးတငျလို့ မရနိုငျတာဆိုးလျရှားသိသငျ့ပါပွီ။
မားကပျဈရရျှဖိုဒျ့ – ၃
အမှနျဆိုသူ့အနနေဲ့ပှဲထဲကတောငျထှကျသှားသငျ့တာပါ။တဈယောကျထဲရုနျးကနျနရေတဲ့ သူ့ကိုကွညျ့ရတာပိုပွီးပငျပနျးလာပါတယျ။မနျခကျြစတာ သားတဈယောကျရဲ့ သှေးနဲ့ ယူနိုကျတဒျကိုခဈြတဲ့စိတျက ဒီနပှေဲ့အတှကျတော့ပိုပွီးပငျပနျးစမှောအသခြောပါပဲ။
မမှားပမေယျ့ ပိုပွီးပါးနပျခဲ့သငျ့တယျ။တကယျလို့သူသာမထှကျသေးရငျ ပှဲအခွအေနကေတမြိုးတမညျဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။
Previous Article အပြောင်းအရွှေ့အပါအ၀င် နံနက်ခင်း ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ
Next Article ဖိအားတွေများလာတဲ့ ယူနိက်တဒ်အမှု့ဆောင်ချုပ် အဒ်ဝုဒ်ဝဒ်